Nyefee Music, videos na foto site na kọmputa na-iPod
> Resource> iPod> Olee Otú Ị Pụrụ Nyefee Music, videos na foto site na kọmputa na-iPod
Iche na ị bụ ọhụrụ iPod ọrụ na onye ị na-amaghị na iTunes. N'ihi ya, ọ pụrụ ịbụ nnọọ ike nke na ị nyefee photos, videos na music site na kọmputa na-iPod. Ma ọ bụ, ị bụ nnọọ ike gwụrụ nke na-eji iTunes ka mmekọrịta music, videos na foto gị iPod. N'ihi na, mgbe iTunes na-akpaghị aka mmekọrịta music, videos na foto gị iPod, aga na music, videos na foto ga-ehichapụ. Gịnị ma ọ bụrụ na unu achọghị ida bụbu n'anya mgbe na-eme mmekọrịta?
Dabara nke ọma, i nwere ike inwe ihe na kọmputa na-iPod transfer, bu, na Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wonershare TunesGo (Mac). Enweghị iTunes, ị na-enwe ike iṅomi music, foto na vidiyo site na kọmputa na-iPod ozugbo. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ dịghị mgbe deletes songs, fim na ihe oyiyi na gị iPod. N'ihi ya, i nwere ike iji ihe omume n'enweghị.
Otú nyefee videos, foto na music si PC ka iPod
Nzọụkwụ 1. Launch a PC ka iPod transfer
Ka malitere, wụnye na ẹkedori TunesGo. Jikọọ gị iPod gị na kọmputa site na eriri USB. Ozugbo ọ ejikọrọ, TunesGo ga-amata gị iPod ozugbo o kwere omume. Mgbe ahụ, ị ​​iPod ga-gosiri na isi interface dị ka screenshot-egosi n'okpuru:
Cheta na: TunesGo akwado iOS 5.0 na mgbe e mesịrị, gụnyere iOS 9. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na ọtụtụ iDevices, dị ka iPod aka 5, iPhone 5s na iPad Obere. Iji nweta dum ndepụta nke na-akwado iDevices, ị nwere ike pịa akwado iDevices.
Nzọụkwụ 2. Copy music, videos na foto site na kọmputa na-iPod
Mgbe ahụ, pịa "Media", na ekpe kọlụm. Pịa "Music" ke mgbasa ozi window. Nke a ga-bugota music window. Wee pịa triangle n'okpuru "Tinye"> "Tinye File" ma ọ bụ "Tinye nchekwa". Chọta gị chọrọ music na mbubata ya na gị na iPod.
Mgbe ị mbubata music site na kọmputa, ị nwere ike mbupụ music ọ bụla playlist na gị iPod.
Mbubata vidiyo si na kọmputa na-iPod, pịa "Media"> "Movies"> ihe triangle n'okpuru "Tinye"> "Tinye File" ma ọ bụ "Tinye nchekwa". Ịnyagharịa ka ebe ị na-azọpụta videos na mbubata ha.
Ọ bụrụ na i bu n'obi na idetuo foto iPod, ị dị nnọọ mkpa pịa "Photos" ke hapụrụ panel. Ọ ga-ewetara gị na foto window. Mgbe ahụ, pịa triangle n'okpuru "Tinye" ịhọrọ "Tinye nchekwa" ma ọ bụ "Tinye File" nyefee foto gị iPod.
Ị mere nke ọma! Music, videos na foto na kọmputa gị na-agafere gị iPod ọma. Ugbu a, na-enwe ma na-ekele ha na gị na iPod.
Jiri ya tụnyere iTunes, TunesGo na-enye gị a mara mma mfe ọzọ bara uru ụzọ ahụ, ọ bụghị ya? E wezụga transfer music, videos na foto, ị nwekwara ike mbubata Podcast, audiobook na TV na-egosi na ndị ọzọ. N'otu oge ahụ, nke a na kọmputa na-iPod transfer nwere ike ijikwa iPhone na iPad nakwa dị ka iPod. N'agbanyeghị ma ị chọrọ jikwaa media, na kọntaktị na foto gị iPhone ma ọ bụ iPad, ọ kpam kpam-arụ ọrụ gị.
Otú nyefee Photos si iPod aka ka Mac
Mfe ma Nchekwa Method nkwado ndabere na mpaghara iPod Music na Otu Click
Olee otú Hichapụ Music si iPod na ogbe
Mmiri mebiri emebi iPod aka! Olee otú Naghachi Data sitere na ya